Google kwupụtara ọkwa mmiri, "Google Ugbu a" maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ | Gam akporosis
Google eweputala opupu ihe ubi, onye enyemaka dijital ohuru maka nyere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ aka nke ahụ na-eji ọrụ azụmaahịa Google. Ngwa nke na-abịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge ahụ dị ka ebumnuche ndị ahụ nke Google iji lekwasị anya na enyemaka enyemaka na anyị nwere ike ịhụrịrị na Google I / O 2016, ogbako ndị nrụpụta kwa afọ.
Mmiri, nke dị na ule nyocha maka obere akụkụ nke ndị ọrụ, dị ka Google Ugbu a maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ. Nke a na-etinye anyị n'ihu nyocha ọchụchọ pụrụ iche nke na-eji ọgụgụ isi eme ihe iji gosipụta ozi site na nchịkọta ngwaahịa Google, dịka Google Drive, Gmail, kalenda, akwụkwọ Google na ndị ọzọ.
Ihe dị mkpa nke ngwa a maka ụlọ ọrụ bụ n'ihi na onye ọrụ nkịtị nwere ike iri otu ụbọchị ọrụ na nyocha na nchịkọta ozi, dịka Prabhakar Rahavan, osote onye isi ala injinịa maka Google Apps kwuru. Ndị ọzọ nke uru ya bụ na ọ na-enye bara uru nke ukwuu maka ndụmọdụ nye ndị ọrụ n'ogologo ọrụ ha niile.
N'oge okpomọkụ nke ọbịbịa nke ngwa a, ndị ọhụụ ọhụrụ maka saịtị Google, ngwaahịa na-arụ ọrụ dị ka ọnụ ụzọ ozi iji nweta ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa. Ugbu a, mgbe ị na-emepụta saịtị Google, ndị ọrụ nwere nhọrọ nke ịdọrọ na dobe na nhazi na ngwa ọrụ na-arụ ọrụ n'oge, atụmatụ maka okike ndị ghọrọ ọkọlọtọ na ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka Google Docs. Na Google Sheets.
O nwekwara saịtị Google ugbu a emebe imewe nke mere na ọdịnaya gị dabara nke ọma na ụdị ngebichi niile, ọ bụrụ ama, laptọọpụ ma ọ bụ ihe ngosi 30-inch. A ga - ahụ mgbanwe ndị a ka Google na - ebunye ha, ebe mmemme nke mmiri dị site na njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google weputara opupu ihe ubi, onye enyemaka nyemaka maka ndi ahia
Samsung Galaxy S7 ga - eru nkeji 25 nde ere na ngwụcha ọnwa